Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Ukuthintela imali yeenqwelo moya kusongela ukubuyela kwimeko yesiqhelo kushishino
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Phantse i-963 yezigidi zeedola kwiinqwelomoya ziyavalwa ekubuyiseleni kwilizwe phantse kumazwe angama-20.
Oorhulumente bathintela phantse i-1 yezigidigidi zeerandi kwimali yeenqwelo moya ukubuyiselwa kwilizwe labo.
Iinqwelo-moya azizukukwazi ukubonelela ngoqhagamsheleko oluthembekileyo ukuba azinakho ukuxhomekeka kwingeniso yendawo.
Kubaluleke kakhulu kubo bonke oorhulumente ukuba babeke phambili ukuqinisekisa ukuba iimali zinokubuyiselwa kwilizwe ngokufanelekileyo.
Umbutho wezoThutho loMoya weHlabathi (IATA) ukhuthaze oorhulumente ukuba bathobele izivumelwano zamazwe aphesheya kunye nezibophelelo zesivumelwano ukuze iinqwelomoya zibuyisele kwilizwe phantse kufutshane ne-1 yezigidigidi kwimali evaliweyo kuthengiso lwetikiti, indawo yempahla, kunye neminye imisebenzi.
“Oorhulumente bathintela phantse i-1 yezigidigidi zeerandi kwimali yenqwelo-moya ekubeni ibuyiselwe kwilizwe labo. Oku kuchasana neenkomfa zamazwe aphesheya kwaye kungakucothisa ukubuya kohambo nokhenketho kwiimarike ezichaphazelekayo njengoko ishishini leenqwelo moya lisokola ukubuyela kwimeko ye-COVID-19. Iinqwelo-moya azizukukwazi ukubonelela ngoqhagamsheleko oluthembekileyo ukuba azinakho ukuxhomekeka kwingeniso yendawo ukuxhasa imisebenzi. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba bonke oorhulumente babeke phambili ukuqinisekisa ukuba iimali zinokubuyiselwa kwilizwe ngokufanelekileyo. Ngoku ayiloxesha lokufumana amanqaku 'ngokubeka intsholongwane ebalulekileyo emngciphekweni,' utshilo UWillie Walsh, IATAUMlawuli-Jikelele.
Phantse i-963 yezigidi zeedola kwiinqwelomoya ziyavalwa ekubuyiseleni kwilizwe phantse kumazwe angama-20. Amazwe amane: iBangladesh (i-146.1 yezigidi), iLebhanon (i-175.5 yezigidi zeedola), iNigeria (i-143.8 yezigidi zeedola), kunye ne-Zimbabwe (i-142.7 yezigidi zeedola), i-akhawunti engaphezulu kwe-60% yale mali iyonke, nangona kukho inkqubela-phambili elungileyo ekunciphiseni imali ebhlokelweyo eBangladesh nase Zimbambambamba.
“Siyabakhuthaza oorhulumente ukuba basebenzisane namashishini ukusombulula imiba ethintela ukuba iinqwelomoya zingabuyisi imali. Oku kuyakwenza ukuba ukubhabha ngenqwelomoya kubonelele ngonxibelelwano olufunekayo ukugcina imisebenzi kunye namandla oqoqosho njengoko bechacha kwi-COVID-19, utshilo uWalsh.